Umthetho: ubulili be-webcam buyi-pornography bukhohlakeleyo yokuhlawula | Umvuzo weZiseko
Ikhaya Umthetho I-webcam yesondo
I-documentary kwi-BBC 3 ebizwa ngokuthi "i-Webcam Boys" yokusasazwa ngoFebruwari 2016 ibike ngepiliyoni yezigidigidi, imboni yewebhu webcam. Lulandele ubomi be-4 imifanekiso yamabhinqa e-UK e-UK. I-Webcaming apho abantu abazimeleyo benza khona ubomi, imisebenzi yokuvuselela ngokwesondo ngekhamera yekhompyutha yokuhlawula abathengi. Kufana thumela ngeposi nge-smartphone kodwa ngezinga eliphezulu. Eli lixesha elincinci lemveliso yezobucayi. Kukho iingcamango ezibangelwa ngabadlali be-webcam ye-100,000 e-UK kuphela.
Iimodeli ezifakwe kwi-documentary zithatha njengendlela yokwenza imali elula, ukwenza izenzo zesondo kuphela okanye nabahlobo abaya kwenzayo nangoko, kodwa ngoku ngokuhlawula ukuze banelise abaxhamli babo beentlobo ezahlukeneyo.
Zonke iimodeli zaziphatha njengebhizinisi. Njengoko ininzi ifunyenwe, abathengi baxakeka ngokukhawuleza ngezenzo zesondo ze-vanilla kwaye bafuna into entsha kunye nokukhuthaza. Oku kuthetha ukuba ukugcina abaxhamli bezonwabile 'iimodeli' kufuneka bazame ukufumana abantu abatsha kwi shishini okanye benze izenzo ezigqithiseleyo ngokwabo ukugcina abaxhasi behlawula.
Ngokutsho kwinqaku kwiphephancwadi labesifazane kwi-2014, abanye abasetyhini 'benza' ngamadoda kwi-webcams kwakhona ngokubuyisela izipho abaye bacela nge-Amazon ifuthe. Yisitampu esithambileyo. Abantu abaninzi bafumana ingxowankulu kwimali baze baqikelele indlela abaziphatha ngayo nangona bephule imilinganiselo yabo yokuziphatha okanye abo beentsapho zabo ezixhalabileyo. Abaninzi abayithandi njengoluhlobo lobuhenyu.
Enye imodeli kwiphepha ekugqibeleni yayifikelele kumda wakhe wokuzama ukukholisa abaxumi abaninzi kwaye banquma ukuthengisa iimpahla zakhe ze-muscular kumashishini okhuseleko.
Ingaba umntu unika ulwazi okanye unxanelekile, umlutha kwi-intanethi yeyona intsebenzo ebalulekileyo ekukhuseleni leli shishini.
Iingcali zezobugebengu ezicwangcisekileyo zilandele phantsi abasebenzisi abahlawulela imali kwiintsapho ezihlwempuzekileyo kumazwe ahluphekileyo abaphoqa abantwana abancinci ukuba benze izenzo zozesondo ngokuhlala nge-webcam ekwenzeni ukuxhaswa ngokwesondo kwabaxhasi.
Umva nje, umzekelo ogqithiseleyo wawunokuhamba phambili Trevor Monk ngubani owazityhafaza amantombazana amancinci ePhilippines waza wagwetshwa iminyaka eyi-19-nesiqingatha. UTrevor Monk naye ukhokhela malunga ne-£ 15,000 ukujonga ukusetyenziswa kakubi kwezesondo eManila kwi-webcam yakhe.
Amapolisa afumane ngaphezulu kweemifanekiso ze-80,000 kunye nevidiyo ze-1,750 ezingcolileyo zabantwana ekuhlaseleni ekhaya lakhe ngo-Matshi 2015. Wavuma ukuba abe nemifanekiso engcolileyo yabantwana, ukuhlaselwa komntwana phantsi kwe-13 nokukhuthaza umntwana ukuba ahlanganyele kwimisebenzi yesondo.
Enye yamantombazana awayewaphethe gadalala yayineminyaka esibhozo ubudala kwaye umfanekiso womntwana oneminyaka emithathu wafunyanwa phakathi kwemifanekiso. Ujaji u-Anuja Dhir uchaze le mifanekiso “njengemifanekiso ekhathazayo yabantwana abancinci kakhulu abaphethwe gadalala kwaye behlaziswa ngeyona ndlela imbi”.
<< Umzi mveliso we-Porn